अन्तर्वार्ता::Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
० निर्वाचन सकिएको एक महिना पुगिसक्यो, नयाँ सरकार बन्न ढिलो हुनुको कारण के होला, एमालेले त शंका व्यक्त गरेको छ नि ? – एमालेले बुझेर पनि बुझ पचाएको हो । एमालेले नै बनाएको संविधानमा यस्तो प्रावधान राखिएको हो । त्यसैले यो संवैधानिक कुरा हो । संविधान कस्तो बनेको रहेछ भन्ने एमालेले बल्ल बुझेको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसकेपछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभएरै नयाँ सरकार बन्न ढिलो भएको हो । ० राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अलि ढिलो भएन र ? – पहिलो कुरा त, यो संविधानमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने विधि र प्रक्रियाबारेमा केही…
म कानुनविद् मिवाकर पन्त २०३२-३३ सालतिर कानुन पास गरेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेंका हुन् । नेपाल सरकारको रिटायर्ड सचिव पन्त तिखो राजनीतिक विश्लेषण गरिरहेका छन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका पन्तले राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका छन् । मुलुकको अहिलेको राजनीतिक धारभन्दा पृथक विचार राख्ने उनी आशामा भन्दा निराशामा गुजुल्टिएका पो हुन् कि भन्ने आभाष पनि यो वार्तामा भेटिन्छ । संविधान कार्यन्वयनको चरणमा मुलुकले गतिलिईरहदा पूर्व सचिव पन्तको अलगधारको विचार कस्तो छ त ? तरुणका लागि पन्तसँग भएको कुराकानी…
० राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि अब राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्यो, होइन ? – राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको बाटो खुल्ला भएको छ । अब चाँडै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ र राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्छ । अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि राजनीतिक गाँठो फुकेको हो । यत्रो समय अध्यादेश रोकिनु हुदैनथ्यो, ढिलै भएपनि स्वीकृत भएको छ । ० राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रक्रिया बहुमतीय पद्धतिबाट भएको भए तपाईहरूलाई केही फाइदा हुने थियो, तैपनि तपाईहरू…
० दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा ललितपुरको तीनवटै क्षेत्रमा कांग्रेस विजयी भएको थियो, तर यसपटक तीनवटै क्षेत्र गुमाउनुभयो नि ? – हारको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो । २०७० सालको चुनावमा हामीले तीनवटै क्षेत्रमा जितेका थियौं । यसपटक कुनै सांगठनिक कारणले हामीले हारेका होइनौं । भोटका हिसाबले हामीले जितेका छौं । वाम गठबन्धन र सम्पूर्ण प्रतिपक्षी एक ठाउँमा आएकाले यसपटक हामीले ललितपुर गुमाएका छौं । ० कांग्रेस हार्नुमा के के कारण छ ? – २०७० साल र अहिलेको चुनावमा…
० प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अहिले (शनिबार बिहान) सम्म आएको परिणामलाई तपाईले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? – यो परिणामको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्दा नाकाबन्दीको बेलामा केपी ओलीले जसरी अडान लिए भनिएको थियो, त्यसको अत्यधिक प्रभाव परेको घटनाको रूपमा यो चुनावलाई हेर्न सकिन्छ । नाकाबन्दीको बेला उनले लिएको अडानको प्रतिफल पाएको हो एमालेले । ० यसमा अरु पनि कारण होलान् नि ? – अरु १२÷१३ वटा कारण मैले बुझेको छु । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यति ठूलो सरकार बनाउनु सान्दर्भिक थिएन । यति…
० तपाईको चुनावी क्याम्पियन कस्तो भइरहेको छ ? – हाम्रो चुनावी क्याम्पियन एकदमै राम्रो भएको छ । अहिले हामी घरदैलो कार्यक्रममा छौं । भोलि (आइतबार) घरदैलोको अन्तिम कार्यक्रम हुन्छ । त्यसपछि हामी मतदातासँग छलफल, भेटघाट, कोठे बैठक सुरु गर्छौं । घरदैलोबाट हामी निकै उत्साहित भएका छौं । हामी विजयी हुन्छौं । ० तपाईको प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ ? – हाम्रो प्रतिस्पर्धा वाम गठबन्धनसँग हुन्छ । ० एमाले होइन ? – वाम गठबन्धनसँग नै हुन्छ भनांै । गठबन्धनमा एमाले र माओवादी केन्द्र…
० निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ? – तयारी निकै राम्रो भएको छ । जित सुनिश्चित भएको छ । प्रचार प्रसार एकदमै राम्रो भएको छ । ० चुनावी एजेन्डा के के उठाउनु भएको छ ? – संविधान संशोधका विषय छन् । हामीले दोस्रो संशोधन गर्न सकेनौं । एमालेको असहयोगका कारण दोस्रो संशोधन गर्न नसकेका हौं । हामीले विराटनगरलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भनेका छौं । बाढीले ध्वस्त बनाएका मोरङका खोलामा तटबन्धनका लागि हामीले कोसिस गरेका छौं । हामीले विराटनगरका सबै ठाउँमा पाँच…
० चुनाव प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? – चुनावको तयारी एकदमै राम्रोसँग भइरहेको छ । अहिले पनि म घरदैलोमै छु । अहिले (शनिबार) म छैमलेको भण्डारखर्क भन्ने ठाउँमा छु । यहाँका स्थानीय बासिन्दासँग भेट गरिरहेको छु । ० स्थानीयवासीको रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ ? – जनताको रेस्पोन्स एकदमै राम्रो छ । यहाँका जनता मंसिर २१ गते पर्खिरहेका छन् । कहिले मंसिर २१ आउला र नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराउँला भनेर आतुर भएका छन् । ० उनीहरूको माग कस्ता…
० तपाई प्रचार प्रसार समितिको सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ । सहसंयोजक भएको हैसियतलले भन्नुपर्दा अहिले देशभर चुनावको प्रचार प्रसार कस्तो भइरहेको छ ? – एमाले र माओवादी मिलेर मिलेर जसरी उनीहरूले बाहिर हल्ला गरिरहेका छन्, अकंगणितको हिसाब गरेर हामीले जित्छांै, कांग्रेस कमजोर हुन्छ भनेर उनीहरूले जसरी भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्, अहिले उनीहरूको मुख्य हतियार पनि त्यही भएको छ । तर यथार्थमा त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा एमालेका मान्छेहरू माओवादीसँग मिलेकोमा रुष्ट भएका छन् । कतिपय ठाउँमा एमालेसँग मिलेकोमा…
० तपाई ललितपु्र १ बाट निर्वाचित सांसद, तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति, तर तपाईको प्रतिस्पर्धीले त मैले गर्दा उदयशमशेर चिनिएको छ भनेर भाषण गर्दै हिँडेका छन् नि ? – राजनीतिक र गैरराजनीतिक व्यक्तिमा फरक भनेको नै यही हो । जो मसँग आज चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्, उनी राजनीतिक व्यक्ति होइनन् । उनमा राजनीतिक संस्कार नै छैन । उदयशमशेर राणा २०४८ सालदेखि ललितपुरका प्रत्येक कुनाकाप्चा पुगेको छ । मेरो बुबा चुनाव लड्दा तीनैपटक म उहाँसँग प्रत्येक गाउँगाउँ पुगेको थिएँ । म…